Jeju Oceanarium, Aqua Planet Jeju - Jeju Island
Adiresy: 127-3 Goseong-ri, Seongsan-eup, Seogwipo, Jeju-do, Korea Atsimo
Fotoana fiasa: Masoandro-Fr 10: 00-19: 00, Sa 10: 00-20: 50
Ao an- tanànan'i Jeju any amin'ny faritra atsimon'i Jeju dia misy iray amin'ireo akvarium lehibe indrindra (Aqua Planet Jeju) any Azia. Ireto avy ireo mpizahatany izay maniry, amin'ny fiarovana tanteraka, hahita ahi-dratsy sy ny taratra avy lavitra.
Ny habetsaky ny fiara rehetra ao amin'ny aquarium dia 10 800 taonina, ny haavony dia mahatratra 8,5 m (mifanaraka amin'ny trano misy rihana 3), 23 m ny halaliny, ary 60 sm ny rindrina. Noho ireo asany sy solomaso acrylic mazava mazava ao amin'ny Jeju Oceanarium Ny fiantraikan'ny 3D sy ny fidiovana tanteraka dia noforonina.
Mba hananganana ity tetikasa ity dia nandany ny 10 000 tapitrisa dolara ny governemanta. Nisara-bazana kely ny sehatry ny ocean izay ahitan'ny mpitsidika:
mariazy marika: feso, sokatra, lôtô, tombo-kase ary mozika;
vorona (penguins malaza indrindra);
kibatra sy kintana an-dranomasina;
Ao amin'ny aquarium sasany, ny kiraro kely dia milomano, ary amin'ny hafa - ny angady sy ny antsantsa goavam-be. Afaka mahita bibikely ianao amin'ny alalan'ny tonelina sy ny varavarankely. Ao amin'ny dobo iray dia misy faritra mifandray amin'ny toerana izay ahafahanao manohina ny trondro sy ny lion-biby antsoina hoe Boria amin'ny tananao.
Fanehoana ao amin'ny Jeju Oceanarium
Am-tanana, nomena bokikely rehetra ny vahiny, izay manondro ny toerana sy ny fotoan'ny fandaharana. Ary koa, ity fampahalalana ity dia alefa amin'ny fampisehoana manokana manerana ny trano. Ny solontenan'ny Aquarium dia misy dingana 3:
Ny fahombiazan'ny feso sy ny tombo-kase. Ity dia fampisehoana mamirapiratra miaraka amin'ny mozika, fifaninanana ary ny vokatra mitaratra.
Fifandimbiasan'ny atleta simenitra. Ny efitrano dia tantaran'ny rano miaraka amin'ny akrobatsa (zipo sy piraty). Mivezivezy eny amin'ny peratra izy ireo amin'ny haavo 16 metatra. Etsy andaniny, mpanakanto Rosiana ireo mpanakanto ireo.
Fanomezana antsantsa. Ny fidinan'ny rano dia midina ao anaty akrôma lehibe ary manome hena ho an'ny biby mpihaza. Io fahitana io dia tsy natao ho an'ireo mpizahatahaka sasatra.
Inona koa ny ao amin'ny Jeju Oceanarium?
Hanabe ny mpitsidika sy hanabe ny ankizy eo amin'ny toeram-ponenana:
3D cinema, izay mampiseho sarimihetsika mahavariana momba ny mponina ao amin'ny ranomasina lalina;
Museum of Natural History, natokana ho an'ny fandinihana ny zavamaniry sy ny biby any amin'ny ranomasina.
Tokony hotsarovana fa ireo fampiratiana, tahaka ny sinema, dia aseho amin'ny teny Anglisy sy Koreana. Raha reraka ianao ary te hiara-misakafo, dia tsidiho ny trano fandraisam-bahiny Aqua Planet Terrace. Izy io dia ao amin'ny efitrano voalohany, ny teboka fototra ho an'ny fikarohana dia ho lamba matevina. Manomana sakafo ara-tsakafo iraisam-pirenena ny trano fisakafoanana, ny ampahany betsaka dia tsara sy mamy.
Ny Jeju Oceanarium dia misokatra isanandro amin'ny fotoana iray amin'ny taona nanomboka tamin'ny 10:00 sy hatramin'ny 19:00, ary ny asabotsy hatramin'ny 20:50. Tsara ny mipetraka eto alohan'ny hanokafana, mandra-piavin'ny bisy. Ny sandan'ny fidirana dia $ 35, ankizy latsaky ny 3 taona maimaim-poana.
Mba hividianana rindrambaiko 20%, ireo mpizahatany dia afaka mangataka tapakila manokana ao amin'ny fandraisam-bahiny . Ao amin'ny Jeju Oceanarium, misy sehatra elektronika hividianana tapakila, mba hahafahanao maka ny tapakila mialoha. Ny fitsidihana dia maka fotoana farafahakeliny 3 ora.
Eo akaikin'ny fidirana amin'ilay toeram-panorenana dia sobika iray ahafahanao milomano. Any amoron-tsiraka dia misy fiarandalamby. Afaka manampy ny fihetseham-po tsapanao amin'ny alalan'ny soavaly ianao.
Afaka mankany Jeju Oceanarium any amin'ny toerana rehetra ao amin'ilay nosy miaraka amin'ny fitateram - bahoaka , izay miala ao amin'ny bus station Seogwipo. Avy eto, ny bus 700, 201, 210 ary 110 dia mankany amin'ny mari-toerana . Ny fiantsoana dia antsoina hoe Sinyang-ri Entrance. Avy eo mankany amin'ny aquarium dia mila mandeha eo amin'ny 1 km.
Ahoana ny handoko ny valindrihana?
Famantarana ny fitiavana amin'ny lehilahy
Ny famolavolana ny efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano miaraka amina fanilo
Toeram-ponenana an-jazakely - fambolena sy fiahiana
Ahoana no ahafahana mamafy dipoavatra amin'ny ririnina?
Afaka mandry mandarin ve aho?
"Zaza tsy mifandray" - ahoana ny hampianarana azy ho namana?
Fihetseham-pon'ny ankizy na 10 minitra fahanginana mangina
Fanosihosena avy amin'ny uretra
Inona no homena ny tale?
Inona no ilaina ho an'ny beboditra?
Wedding bouquet of bande
Herisetra amin'ny fihenan'ny koloroola ao amin'ny ra
Alefaso any an-trano
Kitay mofomamy - tsotsotra tsotra ho an'ny fototra ho an'ny tsindrin-tsakafo